२० वर्षे युवतीको आँखाबाट मौरी निस्किए पछी | Makalukhabar.com
२० वर्षे युवतीको आँखाबाट मौरी निस्किए पछी
बैशाख १ । आँखा शरिरका ती संवेदनशील अंग मध्येको एक हो जसमा यदि सानो कण वा धुलो पसेपनि निकै असहज महसुस हुन्छ । तर यदि महिलाको आँखाबाट डाक्टरले चार जिउँदो मौरी निकालेको भन्ने खबर सुन्नुभयो भने तपाईं के भन्नुहुन्छ ? यो कुरा तपाईंलाई अचम्म लाग्ला तर ताइवानमा एउटा यस्तै घटना सार्वजनिक भएको छ जसले डाक्टरलाई समेत चकित बनाइदिएको छ । डेली मेलको खबर अनुसार ताइवानका डाक्टरले एक युवतीको आँखाबाट चारवटा मौरी निकालेका छन् । ती मौरीले युवतीको आँसु पिइरहेका थिए ।
हस्पिटलका आँखा विशेषज्ञ डा. हुङ्ग सी–तिङ्गले यो घटनालाई संसारकै पहिलो बताएका छन् । पीडित हिले भनिन्, ‘हामी एक आफन्तको चिहान सफा गरिरहेका थियौं । त्यसपछि हामीले गाँजाको बोट उखेल्यौं । अचानक हावा चल्न सुरु भयो जसका कारण मेरो आँखाभित्र केही पस्यो । मलाई लाग्यो बालुवा वा धुलो छिर्यो ।’
डा. हुङ्गले भने, ‘मैले आँखाभित्र किराको खुट्टाजस्तो देखेँ त्यसकारण मैले उनीहरुलाई एकएक गर्दै बिस्तारै झिकेँ, उनीहरुलाई क्षती नपुग्नेगरी ।’ ‘मैले चारवटा मौरीलाई जीवित निकालेँ ।’हिलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको छ । उनी पूर्ण रुपमा स्वस्थ हुने अनुमान गरिएको छ । एजेन्सी